HomeAfaan OromooGaaffiif deebii hogganoota ol-aanoo WBO jaal Marroo Dirribaa fi jaal Gammachuu Abbooyyee
November 24, 2020 Admin Afaan Oromoo 0
IBSA EJJANNOO QEERROO GODINA BOORANAA Irraa kenname!
Kora dhiyeenna kana godina Booranaa magaalaa Yaaballootti , qaama ol aanaa bilxiginnaa kan Oromiyaa Finfinee irraa dhufe; Obboo Dheengee Boruutin kennameefi abbootii Gadaa qarshiin sobanii dogorgorsiisan ilaalachisee QEERROOn BILISUMMAA OROMOO godinichaa ibsa ejjannoo baaseera!
Warroonni miidiyaatti gad ba’anii WBO abaaran turan hunduu lukeewwan TPLF warra turaniifi ammas lukeewwan NAFXANYAA waan ta’aniif bakka argamaniitti tarkaanfiin madaalamaan akka kennamuuf. FKN, Jaatanii Taadhii, Goollicha Galgaloo, Abdullahi, …hundumaa isaanii
Abbootiin Gadaa karaalee makkalaafi maltuu isaanii dogongora isaanii irraa dhiifama gaafachuuf caasaa WBOtti nama ergachaa waan jiraniif, isa QBO fi koree too’attoota maandheelee, akkasumas caasaan gameeyyiin WBO ilaalee akka furmaata itti kennu
Jaarroleen godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa irraa dhufan; jaarrolee gama tokkoon Booranaafi Gujii walitti buusuuf, gama kaaniin qabsoo Oromoo qancarsuuf oliif gad kaachaa jiran waan ta’aniif furmaannii tarkaanfiin madaalawaan bakka argamaniitti irratti ha fudhatamu: gorsinee dadhabne waan tayeef nig aha. Daangaa dabraniiru
Gochoota Makaalakkiyaafi Poolisiin addaa Oromiyaa raawwattee WBOtti deebisuuf kan yaalan: Obboo Dheengee Boruu- hogganaa Biiroo Daldala Oromiyaa, Jaatanii Taadhii -Jaarsaa TPLF, Qaraarsa Gurraachaa, -warra Liiban jaarsa Bilxiginnaa, Guyyoo Galgaloo-Bulchaa godina Booranaa …… cubbuu arraba keessanii rabbiin isanitti ha deebisuu jedhaa hunduu itti muradha. Warra dhugaa qabuuttu abaaruus qabsiisa. Gochaan sun akka kan bilxiginnaafi RIB taye fakeennaa waliin isaniif keenna.
— Godina Booranaa aanaa Miyoo ganda Teessootti fuulbana, 2020 haadhaafi intala kan waliin gudeede poolisii addaa Oromiyaati.
— Godina Booranaa aanaa Dhaas magaalaa Borboriitti Caamsaa, 2020 kan intala dubra gudeedaa kabinee aanichaati
— Godina Booranaa aanaa Goomoleetti Wax, 2020 kan dubra gudeede Poolisii magaalaa Suruphaati
— Godina Booranaa Liibaniifi Gujii Lamaaniitti galgalaaf ganama dhiiraafi dubras kan gudeedaa jiru seelii RIB fi poolisii bilxiginaati
QBO godinicha bifa baayyee of -eegannaa qabuun kan durii caalaa ijaarsa keenna cimsachuun yeroo kamiyyuu caalaa WBO waliin dhaabbachuun saba keenna akka BILISUMMAA gonfachiifnu of cichoominnaan hojjachuudha.
Karaan qunnamtiifi daandiiwwan qunnamtii keenyaa martinuu haaroomanii, daandiiwwan diinonni qabsoo Oromoo baratan irraa irraa karaa daandii haaraa QBO Oromiyaa diina jalaa bararuuf ijaarratee qindoominna keenna akka cimu waldammaqsa.
Qabsoo ummanni Oromoo kallattii maraan ceesisaa jiru keessaatti godinaaleen kibba Oromiyaa akkuma duriitti akka hirmaatan haala of eegannoon guutame kan wareegama salphaa nama kaffalchiisuufi diina irratti balaa guddaa geessisuun akka socho’uuf hojiitti gallee QBO guutuu Oromiyaatti beeksisu barbaanna.
WBOn asiin achi naasuu tokko malee, diinoota qabsoo Oromoo hundaa irratti akka tarkaanfii fudhatu QBO kibba Oromiyaa itti waliif galee jira.
Qaamoleen lolaaf WBO barbaachaaf bosona deemaan kamiyyuu taanaan diina ummata Oromoo waan ta’aniif tarkaanfiin of duuba deebii hin qabne irratti ha fudhatamu
Humn QBO furgaatuun ijaarsa jajjabee jala jirtan kamiyyuu magaalota keenya keessaatti seelii diinaafi gufuu qabsoo Oromoo kanneen tahan saaxilun daandii falmii Oromoo ballisuun itti fufa!
Dhimmii jaarroleen TPLF fi abbootii garaa dubbatte, abaarsaafi murtiin isaanii BOORANAA FI UMMATA Oromoo bakka hin bu’u! ABDIIN SABA OROMOO WBOn HA LAALLISUU!
Dabalataan; ammaaf maqaa isaanii tuquu kan barbaanne WBOf jaarsii Oromoo kan Booranaaf malkamaa eebbisee waan jiruuf, abaarsii diinaa akka itti qabannes jaarroleen korboo dhaaman. WBOn guyyaa guyyaan milkii gonfachuun yeroo dhiyootti ummatasaaf xurree bilisummaa isa dhiigan saaqe akka ballisu ayyaanii dhugaan isan faana jira.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa konyaa Booranaa irraa